Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ndị njem nlegharị anya nke Africa » Enweghị nlekọta ụlọ? Enweghị ọrụ? Mee njem nke ọma ọzọ!
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • investments • Akụkọ okomoko • News • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Networklọ Ọrụ Njem Nleta ụwa taa debere akwụkwọ ndozi ma dọọ aka na ntị na ọrụ ịbelata ga -akwụsịlata ma ọ bụ kwụsịkwa nrụzigharị ngwa ngwa nke ụlọ ọrụ njem na njem.
Network Tourism Network na -aghọta na n'ime afọ nke Covid, ndị ụgbọ elu, ụfọdụ ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ na ụlọ ọrụ aghaghị ịkwụsị ọrụ iji dị ndụ.
Ọ bụ ihe nwute, n'ime oge a, anyị ahụla ka ụwa niile na -agbada na ịdị mma ngwaahịa njem a na -enye ọha.
N'ime post COVID-19 ụwa nke a nwere ike ịpụta na-ewepụ ọmarịcha njem maka nzọụkwụ, na-eme ka nlọghachi sie ike.
The Network Njem Nleta Ụwa na -agba ndị isi ụlọ ọrụ ume ime ka njem bụrụ ihe na -atọ ụtọ, ihe na -atọ ụtọ, na mma ọzọ.
Ịchacha nlekọta ụlọ na enyeghị ọrụ ịchekwa ego ga-akwụsịlata ma ọ bụ kwụsịkwa nrụzigharị njem njem na njem nlegharị anya anyị.
Ndị ga -eji ihu ọchị na ezi ọrụ adọta ndị ọbịa ga -abụ ndị mmeri.
Njem ga -adịkwa mma ọzọ!
”Worldwa ga-ebikọ ọnụ na COVID-19. Ohere iji weghachite njem na njem nlegharị anya na ọkwa 2019 wee mee ka ọ bụrụ ihe na -adịghị mma, ihe ọchị, ma ọ bụ okomoko ịga njem adịghị arụpụta ihe ”Juergen Steinmetz, Onye isi oche nke World Tourism Network kwuru.
”Ndị na -akwalite ma ghara ibelata ọrụ ga -abụ nnukwu mmeri. Mbelata ego ga -agakọ na nsonaazụ mbelata azụmaahịa.
"Anyị na -agba ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ ume ka ha gaa n'ihu na -arụ ọrụ ụlọ, na -edebe ụlọ oriri na ọ barsụ andụ na ụlọ mmanya, echefula iji ọnụ ọchị jụ ọrụ!"
WTN chọrọ ịgba ndị nwere oke ume ume ịrụ ọrụ re-enchanting njem nlegharị anya n'ime ụwa nwere olile anya post-covid. Ndị njem na -achọ ka a na -emegharị ha anya, njem kwesịrị ịbụ ihe ọchị, ọ bụghị nrụgide, ma nyekwa ọrụ ị na -enwetaghị mgbe ịnọ n'ụlọ.
Mee njem nke ọma ọzọ:
Tinyegharịa nhicha ụlọ mgbe niile na ịgbanwe akwa akwa na họtel na ebe ntụrụndụ.
Kwalite ọrụ achọtara na ụgbọ elu ma wepụ ọtụtụ ụgwọ.
Zụlite awa ndị dị mma maka ndị njem.
Anwala ịbụ ihe niile nye mmadụ niile.
Network Tourism Network, Dr. Peter Tarlow biputere ihe na -esote na ọkwa ọnọdụ na weebụsaịtị WTN.
Ọ bụ ihe nwute, n'ime oge a, anyị ahụla ka ụwa niile na -agbada na ịdị mma ngwaahịa njem a na -enye ọha. N'ezie, akụkụ nke ihe kpatara ọdịda a bụ ọrịa na -efe efe. Ọrịa ọjọọ nwere ike ọ gaghị abụ naanị ihe kpatara ọdịda a. Ndị na -ekiri nlegharị anya na njem na njem nlegharị anya na -ahụrịrị mmalite mmalite nke ọdịda ala tupu oria ojoo a na mbelata ogo nke ọrụ ga -emecha mebie ụlọ ọrụ njem.
Ebumnuche e zoro aka na mbelata nke ịdị mma nke ọrụ ndị ahịa sitere na ọnụ ahịa mmanụ ọkụ ruo ike akụ na ụba n'ọtụtụ mba ọdịda anyanwụ. Agbanyeghị na ihe ndị a ziri ezi ma bụrụ eziokwu, naanị ha na -enye akụkụ nke akụkọ ahụ. Ọzọkwa, site n'echiche ụlọ ọrụ njem na njem nlegharị anya, ha bụ ihe kpatara: ihe na -eme ụlọ ọrụ ahụ. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ njem na njem nlegharị anya ga -aga nke ọma n'oge ihe isi ike ndị a, ọ ga -emerịrị karịa ịhụ onwe ya dị ka onye akụ na ụba ma ọ bụ ihe ọjọọ nke ndị ọzọ, ọ ga -enyocha onwe ya wee hụ ebe ya onwe ya nwekwara ike imeziwanye.
Ikekwe ihe iyi egwu kasịnụ na ụlọ ọrụ ntụrụndụ (yana ruo n'ókè dị nta na ụlọ ọrụ njem azụmahịa) bụ eziokwu na njem efunahụla ezigbo ịhụnanya na ọmarịcha ya. N'ịsọ ọsọ maka arụmọrụ na nyocha ọnụọgụ, ụlọ ọrụ njem na njem nwere ike chefuru na onye njem ọ bụla na -anọchite anya ya ụwa, na ịdị mma ga -akarị oke.
Karịsịa na ụlọ ọrụ na -eme njem ezumike, enweghị enchantment a apụtala na enwere ntakịrị ihe na -esighi ike ịchọ njem na isonye na ahụmịhe njem.
Maka nke a, Network Tourism Network na -agba ụlọ ọrụ ahụ ume ka:
Tinyegharịa nhicha ụlọ na mgbanwe akwa
Iji kwalite ọrụ achọtara n'ọdụ ụgbọ elu na iwepụ ọtụtụ ụgwọ
Zụlite awa ndị dị mma maka ndị njem
Ọ bụghị ịnwa ịbụ ihe niile nye mmadụ niile.
Mepụta enchantment site na mmepe ngwaahịa. Kpọsaanụ obere ma nyekwuo.
Ọ bụrụ na njem ga -agbake site na enweghị ya na azụmaahịa n'ime afọ na ọkara gara aga, ọ ga -achọrịrị ụzọ gafere ihe ndị a tụrụ anya ya ma ghara ikwubiga okwu ókè. Ụdị ahịa kacha mma bụ ngwaahịa dị mma yana ezigbo ọrụ. Ụlọ ọrụ na -ahụ maka njem ga -enwerịrị ihe ọ na -ekwe nkwa na ọnụ ahịa ezi uche dị na ya.
Ụlọ ọrụ na -ahụ maka njem ga -emepụtarịrị ọnọdụ nchekwa na nchekwa. Enwere ike inwe obere mgbaasị ma ọ bụrụ na ndị mmadụ na -atụ ụjọ. Azụmaahịa na obodo ndị na-eme mgbaasị na-achọpụta na onye ọ bụla nwere ọrụ ọ ga-arụ n'ịmepụta ahụmịhe njem nlegharị anya nke ọma na nke na-emepụta gburugburu pụrụ iche na ọ bụghị naanị maka onye ọbịa kamakwa maka azụmaahịa na obodo.
October 22, 2021 na 09: 35
Daalụ maka post mara mma nke ukwuu. Enwere m olileanya na ị ga-aga n'ihu na isiokwu ndị dị otú ahụ. a na m arị gị nke ọma. Daalụ
[url=https://npchse.net/” ]Shaت عراق دريم[/url]
[url=https://iraqeachat.com/” ]Shaat بغداديات[/url]
[url=https://iraqeachat.com/” ]shat عراقيات[/url]
[url=https://p3dcoin.com/”] Shaat عراق[/url]
[url=https://iraqeachat.com/” ]shat عراقنا[/url]
[url=https://i2m3.com/” ] شات ذهب[/url]
[url=https://chat4u1.com/” ] Shaat ذهب[/url]
[url=https://chat4u1.com/” ]SHAT تاج عراقنا[/url]
[url=https://bnotah.com/” ]Shaت بنوتة قلبي[/url]
[url=https://chat4u1.com/” ]shat عراقنا [/url]